bracking news::आजकै दिन काठमाडौँबाट आयो अत्यन्तै दु:खद खवर !! सबैमा बढ्यो त्रा’स – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/bracking news::आजकै दिन काठमाडौँबाट आयो अत्यन्तै दु:खद खवर !! सबैमा बढ्यो त्रा’स
bracking news::आजकै दिन काठमाडौँबाट आयो अत्यन्तै दु:खद खवर !! सबैमा बढ्यो त्रा’स
काठमाडौं, ९ कात्तिक । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ५ सय ३५ सं’क्रमित फेला परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ५ सय ३५ सं’क्रमित थपिएका हुन् । योसंगै काठमाडौ उपत्यकामा सं’क्रमितको कुल संख्या ६९ हजार ४ सय ९८ पुगेको छ । काठमाडौंमा ५६ हजार ३ सय २ जना, ललितपुरमा ७ हजार ८ सय ८३, भक्तपुरमा ५ हजार ३ सय १३ जना सं’क्रमित थपिएका छन् ।
त्यस्तै,समाजमा सय वर्ष उमेर का’टेको मान्छे प्रायः कमै मात्र भेटिन्छन् तर भोजपुरमा एक व्यक्ति १ सय ८९ वर्ष उमेरका छन् । ती व्यक्ति उमेर अनुसार बुढा भने छैनन् । उनको नागरिकतामा राखिएको जन्म मिति अनुसार उनको उमेर अहिले १ सय ८९ वर्ष पूरा भएको छ।
राईको २०४१ साल चैत ५ गते भोजपुर जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भोजपुरका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । राई भने ९० वर्ष पनि पुगेका छैनन्।
सदरमुकामदेखि २ दिन लाग्ने साल्पासिलिछो गाउँपालिकास्थित साविकको खाटम्मा गाउँ विकास समिति वार्ड नं.–७ का खम्बधन राईको जन्म मिति नागरिकतामा बिक्रम सम्बत १८८६ साल रहेको छ। नागरिकता सच्याउन २ दिनको पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने भएको तथा वृद्ध भत्ता खानबाहेक खासै यसको काम पनि नदेखेकाले नागरिकता नसच्याएको राईले बताउनुभयो।
त्यस्तै अविवाहित र एकल पुरुषलाई पनि भत्ता ? सुन्दा अनौठो लोगेपनि ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले गत दुई वर्षदेखि अविवाहित यो सेवा दिँदै आएको छ । सो नगरपालिकाले एकल पुरुष र अविवाहित ७६ जनालाई मासिक रु एक हजारको दरले नगरपालिकाको अन्तरिक स्रोतबाट मासिक भत्ता दिदै आएको फुङलिङ नगरपालिकाका उपमेयर तारा भट्टराईले बताए ।
६० वर्ष पूरा भएका ७० वर्ष नकाटेको एकल पुरुषलाई समाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रवक्ता महोन न्यौपानेले जानकारी दिए । रासस
देश चलाउने नाइके हरुको बोलचालै बन्द…
काठमाडौंमा यसरी सतर्कतासहित चल्दैछन् बिजुली बस (फोटोफिचर)